[OFISIALY] dr.fone Toolkit - Android Data Recovery Ny tsara indrindra ho an'ny taona 2017
Izao tontolo izao ny 1 angona sitrana rindrambaiko ho an'ny Android smartphone sy ny takela-bato.
Mifanaraka amin'ny fitaovana Android 6000+.
Special Offer (ao amin'ny Mobile ihany)
Fanamarihana: Ampiasao ny fandaharana amin'ny Windows / Mac OS solosaina.
Very antontan-kevitra dia tsy very. Afaka sitrana voafafa antontan-taratasy ao amin'ny Android avy amin'ny tranga iombonana maro.
SD Card Laharana
tsy maintsy hongotantsika Error
Tahirin-kevitra very indray rehefa avy orinasa
Very antontan-kevitra noho ny OS Vaovao farany
Data tsy ampy taorian'ny tsy maintsy hongotantsika na ROM mifandrambondrambona
Jereo & Preview for Free
Raha tsy manana hevitra momba ny very na ny angona ao amin'ny Android azo sitrana na tsia, dia afaka misintona malalaka fitsarana Version Malagasy Bible Society scan aloha. Rehefa vita ny fizahana, dia afaka mijery mialoha ireo antontan-kevitra hita. Izany maimaim-poana.
Various Files no Recoverable
Ity tahirin-kevitra Android fanarenana mamela anao rindrankajy sitrana voafafa na very fifandraisana, hafatra an-tsoratra, sary, WhatsApp hafatra, mozika, sy ny maro hafa Video antontan-taratasy.
Rehefa mahita ny very antontan-kevitra momba ny fitaovana Android, ianao dia afaka mifidy izay zavatra tianao, ary afa-tsy eo amin'ny solosaina iray tsindry.
Support 6000+ Android modely
Azonao ampiasaina ity angon-drakitra Android fanarenana sitrana fampiharana ny angon-drakitra momba ny 6000 Android finday sy ny takela-bato avy any Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET, Huawei, sns nanohana ny lisitry ny fitaovana mbola mitombo haingana.
Ka mamaka tsara sy Unrooted fitaovana Android
Ity tahirin-kevitra Android fanarenana fitaovana miasa ho an'ny mamaka tsara sy unrooted fitaovana Android, nefa dia tsy hanova na inona na inona eo aminy. Ny paka dia ho fitaovana mbola miorim-paka, ary ny unrooted hisy koa ny sisa.
Sitrana Data from SD Card
Toy ny karatra SD amin'ny Android, dia afaka mivantana banjino ny telefaonina na ny tablette, na mampifandray izany amin'ny karatra mpamaky. Samy asa.
Ity tahirin-kevitra Android fanarenana rindrambaiko ihany no mamaky tahirin-kevitra eo amin'ny Android finday na ny takelaka. Tsy manova na inona na inona dia tsy, na mandefa foana na inona na inona amin'ny fitaovana amin'ny hafa.
Android angona fanarenana feo iray matihanina zavatra tsara tarehy. Marina, fa ny olona tsy misy fahaiza-manao matihanina solosaina dia afaka hanazava izany mora foana. Fizahana, mialoha ary sitrana. Rehetra tokony hanao dia ireo dingana telo zaza.
Ireo mpampiasa ho an'ny rehetra izany Android angona fanarenana rindrambaiko maimaim-poana dia afaka mankafy ny fanavaozana amin'ny hoavy. Mpanjifa ihany koa tafiditra.
Notarafina ny angona avy sitrana voafafa fitaovana Android
Notarafina ny fahatsiarovana karatra eo amin'ny fitaovana Android ho sitrana angon-drakitra
Andramo Tsy Free nandritra ny 30 andro!
Sitrana ny angon-drakitra, na voafantina rakitra
Ihany ianareo vao afaka mampiasa ny kaonty sy ny antontan-taratasy
3 dingana tsotra: hifandray, banjino aretina ka hahasitrana ny Android
" Dr.fone Toolkit dia biraonao rindrambaiko ho an'ny Windows PCs. Mametraka azy fotsiny, dia hanomboka ilay fandaharana, ary mifandray ny fitaovana ao amin'ny solosaina. Avy eo, dia afaka mitady voafafa sary, hafatra an-tsoratra, horonan-tsary, ary bebe kokoa amin'ny fifandraisana mora. hahafantatra bebe kokoa >>
- Avy Softonic, mpitarika rindrambaiko Download Ndao 100 tapitrisa isan'andro
" Dr.fone Toolkit ho an'ny Android manana mora ampiasaina interface tsara izay mety ho mpampiasa Fikarohana araka ny ambaratonga rehetra ny fahaizany. Maivana izany ka tsy mampiasa ny rafitra be dia be harena. Amin'ny ankapobeny, ity fitaovana ilaina maika fa afaka mahazo anao nivoaka avy tany dity toe-javatra vitsivitsy raha ny tahirin-kevitra sitrana noho ny fitaovana Android. Hahafantatra bebe kokoa >>
Mety io !!!!!!!!!!!!!!! =)
Ve ny Android fanavaozana teo amin'ny S6 ny 5.1.1 sy ny mpifandray nanjavona (toy ny ho anareo). Dr Fone indray ny lisitra feno (na tsy maintsy hanongotra ny telefaonina voalohany). Mampiasa fomba Alternate be hanesorana ilay rakitra. Ny vidiny kely mba handoavana ny boriky famonjena lehibe.
Ahoana no sitrana Fafao Text Hafatra avy amin'ny Android Fitaovana